Ixabiso lesaphulelo i-China Sand Casting Molding Line Use Flask for Foundry
Umgangatho ophezulu wokuCwina uMatshini weMpahla yokuPakisha kunye nokuhanjiswa kweenkcukacha. Iinkqubo zokuphatha umngundo zilungiselelwe ukuba zilungele isiseko ngasinye sisebenzisa indibaniselwano yemveliso esemgangathweni. Inkqubo yeatomization inokuphucula imveliso. Abasebenzi abangaphantsi kuyafuneka. Inokwenziwa njengendawo ekhoyo. SF tyaba yokuzahlula kunye neebhotile-enemigca shooti ...
Ibhokisi yesanti, Flask zomngundo Machine, Ukubumba Ivoti Flask, Umatshini wokukroba ngaphandle, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Esingxobeni Ukubumbela,